Nyamavhuvhu 2, 2018 arun
Australia zvaJehovha CoinJar anotanga cryptocurrency mari Wholesale vanoita
CoinJar, wokuAustralia Bitcoin Exchange, nhasi yakatanga ari CoinJar Digital Currency Fund, muindex mararamiro cryptocurrency mari Wholesale vanoita. The Fund ine makirasi maviri; Bitcoin Class, izvo chinopa kugarotamba Bitcoin chete; uye Mixed Class, izvo ndehwokuti chamber chokupika BTC, LTC, uye nezvimwe cryptocurrencies, weighted ne yakamisirwa zvitengeswa.
The CoinJar chikwata anodavira kuti vaviri makirasi Fund kupa Wholesale vanoita mukana nzira mari ne Australian Dollars, izvo zvinogona kupa diversification nezvaiitwa twa makirasi. Management yechikoro vari 1.3% por annum nokuti Bitcoin Class uye 1.8% por annum nokuti Mixed Zvinokonzerwa ndinoiitawo renguva dzose uchishandisa mari. mafomu chete kubva Wholesale nemakasitoma unogashirwa kupinda mari. CoinJar anotora pamusoro basa uye norunyararo digitaalinen yesangano pachinzvimbo makambani pamwe runotikurudzira crypto yakasimbiswa mu multi-siginicha wallets.
Square vaiwana $ 37M kubva Bitcoin wokuita zvemusika Q2
sikweya Zvinonzi zvakaoma vhiki rino, pachena kuti kambani vakarumbidzwa $37 miriyoni kubva yayo Bitcoin zvokutengeserana nzi yayo kufurirwa-to-vezera mari chinja Anwendung, Square Cash. Yaiva simba kota nokuda Square pamwe kugadziridzwa EPS kurova inofungidzirwa ($0.13 Vs. $0.11) uye zveminda kumusoro anenge 5% kubva tarisiro ($385 miriyoni Vs. $368 miriyoni). Total mambure kwemari yakanga $815 mamiriyoni chechipiri chikamu 2018, vakakwira 48% gore pamusoro gore.
Nepo Square kuti Bitcoin kwemari Zviri kota pamusoro kota, Square raimupa ~ $ 1 miriyoni kubva itsva zvokutengeserana inoti, sezvo mari Bitcoin remapazi akanga ~ $ 36M nokuda Q2. Izvi zvave kupfuura nekuongorora wekambani, kuitika varikumahombekombe pamusoro wayo cryptocurrency mabasa havasi nekaupenyu guru. zvisinei, akapa ano pamutemo nzvimbo, mari idzi vangangove ukama oupfumi mu rehurumende uye batana kutyora kuedza. Zvinoshamisa, mugove mutengo Square yave iri kumhedziso misodzi pamusoro rokupedzisira gore, kumusoro anenge 200% wakakodzera zvikuru kubva kupindirana zvakaoma anorova bullishness pamusoro nekambani itsva Kusimbisa cryptocurrency.
Overstock kwakaita Medici inks kukurira Zambian Govment pamusoro blockchain munyika yokunyoresa mutyairi wendege
Overstock kwakaita blockchain-dzinofambiswa kodzero chikamu, Medici Land Governance, iri anonzi partnering pamwe Zambian hurumende kuvaka blockchain-inobva munyika zita yokunyoresa. Pasi chibvumirano, MLG achagovera Zambia ane “Nyika Hurumende chirongwa kuti anounganidza uye awane pfuma muridzi ruzivo vachishandisa blockchain.” MLG akabvuma anunure zvitupa rokuremekedza iri digitaalinen uye papepa kuti hurumende rudzi kupfurikidza November 30th, 2018 kushanda uchapupu Pfungwa kwenguva streamlined muitiro.
Overstock.com muvambi uye CEO Patrick Byrne akati chirongwa kungabatsira nyika danho pose upfumi kuti anovaka kuvimba kuburikidza zvemichina. On kufanana chitsamba, Byrne yave kushanda Peruvian Nezveupfumi Hernando of Soto pamusoro Joint blockchain kodzero asingashumbi rinonzi De Soto Inc. Bhizimisi ndehwokuti kugovera mabasa vanhu vanenge mashanu mabhiriyoni nokubvumira navo kuwana misika guta rose.
hurumende Australian invests mu crypto startup kusimudzira ushanyi
Hurumende Australian anoronga ape ngaamuitire kuti crypto startup sechikamu $8 mamiriyoni utsanzi mari. The TravelbyBit digitaalinen mari kubhadhara chikuva yokufamba uye ushanyi Mazinga ndeimwe 70 Makambani kuti achawana “Mberi Queensland vesa Ideas” mari, kunotsigira Entrepreneurs muna kweQueensland kutanga mabhizimisi avo.
Chinangwa chekambani richava rinowedzera nhamba revashanyi kuna Central kweQueensland nokutengesa inopa okufamba cryptocurrencies uye pakusika zvimwe mabasa. Innovation Minister Kate Jones akati: "TravelbyBit akaronga imwe akangwara nzira kuti zvive nyore vanoshanyira pedu kubhadhara kutenga vavo vakawanda mabhizimisi yemunyika kubvuma cryptocurrency kubhadhara… Ndinonzwisisa zvakananga TravelbyBit ari kukanganiswa nzvimbo dzakaita Bundaberg (achitevedza Great Chipingamupinyi Dzedu Dziri) - kushandisa cryptocurrency kuti zvive nyore vashanyi kuti bhuku mazororo ".
Brazilian crypto Exchange akahwina Murayiro pamusoro pamahombekombe avo vakaatsinzina nhoroondo yaro
Brazilian cryptocurrency Exchange Walltime achangobva akava dare kurwisana utsinye omunharaunda pamahombekombe Caixa Econômica Federal, kumanikidza kuti unfreeze nhoroondo yaro akabata kupfuura $200,000 ukoshi mari. Walltime akava rokutanga Murayiro, zvichireva mutongo wedare haisati kokupedzisira asi zvisinei achirega exchange kushandisa mari nekuda kwayo kuramba achishumira vatengi vari zvokungoitawo.
Walltime akanga asingakwanisi ironge mutengi deposits nekuti mari dzavo chando & anonzi vakatambura kukuvadzwa munguva iyi. Gweta Walltime vake vati Kurasikirwa kusapfuudza $ 250K yakanga rakabayirwa pana Caixa Econômica & chete "Zvingangoita ramangwana indemnity chiito" achazviona recoup navo. mhosva Walltime paaitonga Caixa Econômica akanga kudare shure mangwanani April gore rino, sezvo sezvarinotaura yayo "akaundi akarwiswa pasina chinhu chiziviso kana kururamiswa" musi March 22nd. Maererano gweta maviri Wall Nguva, kubhangi kuti unotii kundorwa nhungamiro wakaratidzwa kuBrazil Central Bank.
SBI invests $ 9M mugiredhi zvechechi cryptocurrency nomukaka papuratifomu
mabasa mari Japanese hofori SBI Holdings yave paakapiwa $9 mamiriyoni US digitaalinen pamusika mapurani Clear Markets kuti mari nokuumba cryptocurrency nomukaka zvokutengeserana papuratifomu avakirwa zvechechi vanoita. SBI Crypto Investment akawana 12% rokutambudzikira Clear Markets, iro makuru Charlotte, NC uye ane emapazi NYC, London, uye Tokyo. SBI anonzi unobhadharwa 1 bhiriyoni Yen ($9 miriyoni) nokuti ayo ushoma muridzi chinzvimbo kambani.
In mari Clear Markets, SBI ndehwokuti kuvaka nomukaka mukutsinhana inogonesa zvechechi vanoita kuti kuchinjanisa mari zvigadzirwa akasungirirwa mutengo kufamba Bitcoin nemamwe cryptoassets. zvinogadzirwa zvakadai, izvo zvingasanganisira neramangwana, mikana, uye swaps, kubvumira masangano ruzhowa dzimwe nzvimbo kuti vave vari cryptocurrency pamusika, kuderedza ngozi uye vakwanise kiya mune mari kana kuderedza losses.The panopindwa zvaichengeta itsva mumusika & pokumuka platforms itsva vanotarisirwa kupa zvikoro pamwe yakawanda kuchinja mu sei ivo vawane kugara cryptoassets.
Nyamavhuvhu 20, 2018 pa 8:02 PM